I-Tinder: Ingabe Kuyafana Ne-Tinder Noma Okunye Okuthile? - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Uma uhlangabezane negama elithi “Tyyinder,” ubungahle ucabange ukuthi leli lifana kakhulu nele-Tinder. Sicwaninge leli gama elingukhiye ukuze sithole incazelo yalo yangempela, kodwa asikwazanga ukuthola lutho ngaphandle kwezindatshana ezidukisayo ku-inthanethi. Ngakho-ke, siphetha ngokuthi i-Tyyinder yigama elingapeliwe kahle le-Tinder. Njengoba iTinder... Funda kabanzi
Ungasilungiselela Kanjani Isicelo Semalimboleko Yebhizinisi Elincane
Uma uke wahlangana negama elithi "Tinder,” kungenzeka ukuthi ucabange ukuthi lokhu kufana kakhulu ne-Tinder. Sicwaninge leli gama elingukhiye ukuze sithole incazelo yalo yangempela, kodwa asikwazanga ukuthola lutho ngaphandle kwezindatshana ezidukisayo ku-inthanethi. Ngakho-ke, siphetha ngokuthi i-Tyyinder yigama elingapeliwe kahle le-Tinder. Njengoba i-Tinder iyinkundla yokuqomisana esezingeni eliphezulu esezingeni eliphezulu, abantu abavela kuwo wonke umhlaba bayayisebenzisa.
Ngakho-ke, lapho abasebenzisi abangewona amaNgisi besesha i-Tinder ku-Google nanoma iyiphi enye injini yokusesha, kungase kube icala lokuthi bayibhale kabi njenge-Tynder. Futhi, lapho abantu abaningi besesha igama elifanayo izikhathi eziningi, izinjini zokusesha zilithatha njengegama elingukhiye. Ngakho-ke, seliphenduke igama elingukhiye elingase likhiqizwe amathuluzi amaningi we-SEO. Ama-blogger amaningana abhala okuqukethwe kuleli gama elingukhiye ukuze akhiqize ithrafikhi eyengeziwe kubhulogi noma iwebhusayithi yabo.
Njengoba i-Tynder ne-Tinder ziyizinto ezifanayo, kodwa abantu abaningi bangazipeli kahle, akudingeki udideke phakathi kwala magama womabili. Lapha, sikhulume imininingwane ebalulekile mayelana ne-Tinder.
Ukuqomisana Ku-inthanethi Kuyinto Okujwayelekile Okusha
Esikhathini esidlule, ukuphola kwakuyinqubo ehluke kakhulu. Kuzodingeka uye endaweni yokucima ukoma, uthathe iphephandaba, uhlangane nabangane ukuze uthole ikhofi, ulinde ngaphandle kwesitolo segrosa, njll. Izinto zishintshe kakhulu, futhi manje, abantu bathola uthando ku-inthanethi.
Ukuqomisana ku-inthanethi kuyinto evamile entsha. Akuyona nje indlela elula kakhulu yokuhlangana nalowo muntu okhethekile; ibuye idume kakhulu. Futhi yingoba iyasebenza. Isayithi elihle kakhulu lokuqomisana eliku-inthanethi likuvumela ukuthi uthole abantu obathandayo ngempela ngengxabano encane nokukhathazeka. Umgomo oyinhloko wokuphola ngedijithali ubudlelwano bomuntu siqu, ucansi, noma uthando. Izinkonzo zokuqomisana zisiza ukunikeza indawo abantu abafuna umaqondana ukuze bazane ngaphambi kokuhlangana ubuso nobuso.
I-Tinder, uhlelo lokusebenza lweselula lokuphola olumayelana nokuswayiphela kwesokudla noma kwesokunxele, seludlule i-OkCupid njengohlelo lokusebenza lokuqomisana oludume kakhulu olutholakala namuhla. I-Tinder iyanda phakathi kwezinhlelo zokusebenza eziningi zokuphola emakethe. Lokhu kukhula kokuthandwa kungenxa yokuthi i-Tinder iheha kakhulu ezizukulwaneni ezincane. I-Tinder ibalwa ngaphezu kwezinye izinhlelo zokusebenza zokuphola ngenxa yobulula bayo. Abasebenzisi banikezwa kuphela inketho yokuswayiphela kwesokudla noma kwesokunxele, okuyenza ihehe kakhulu ezizukulwaneni ezincane. Ngenxa yalokhu, i-Tinder manje isiwuhlelo lokusebenza oludumile lokuqomisana olutholakala namuhla.
Ngakho-ke kungani kufanele usebenzise i-Tinder? I-Tinder ingasetshenziswa ukuhlangabezana nesilwane sakho esilandelayo, umlingani wakho olandelayo noma umlingani wakho olandelayo ebugebengwini. Kuyindlela enhle yokuhlangana nabantu abasha endaweni yakini, noma ngabe ufuna umngane noma isithandwa. Futhi ngesimo sengqondo esifanele kanye nomzamo omncane, uzokwazi ukuhlangana nalowo muntu okhethekile.
Isebenza kanjani i-Tinder?
I-Tinder wuhlelo lokusebenza lokuphola oluvumela abasebenzisi ukuthi baswayiphe ngokushesha ezithombeni zabantu abaseduze. Uma ubona umuntu omthandayo, swayiphela kwesokudla. Uma ungenjalo, swayiphela kwesokunxele. Uma omunye umuntu eswayiphela kuwena, nawe uyafanisa. Bese, ungakhetha ukuthumela umlayezo kumuntu onentshisekelo kuye. Uma ungenalo intshisekelo, ungavele uqhubeke nokusesha kwakho okufanayo okuhle kakhulu.
Ungakwazi ukufaka kalula uhlelo lokusebenza kuselula yakho njengoba lutholakala kuwo wonke amapulatifomu eselula. Uma usudale i-akhawunti, udinga ukulayisha izithombe zakho ezingu-5-6 futhi wengeze ulwazi ngawe esigabeni se-bio. Ungahlola futhi ukuthi iphrofayela yakho izovela kanjani kwabanye abasebenzisi. Uma usuqinisekile ukuthi iphrofayela yakho iqinile futhi ingaheha abantu, ulungele ukuhamba.
Izizathu Eziyisikhombisa Zokusebenzisa i-Tinder
Naphezu kokuba khona iminyaka, ukuqomisana nge-inthanethi namanje akusajwayelekile. Ngokocwaningo, yi-3.1% kuphela yabantu base-US abasebenzise ukuqomisana nge-inthanethi. I-Tinder ingesinye sezinkundla ezithandwayo zokuqomisana eziku-inthanethi namuhla. Ilokhu ikhula ngokushesha kusukela yethulwa ngo-2012. Kukhona phezu 10 million akhawunti abasebenzisi on Tinder. Iningi labo alishadile, lifuna umaqondana.
I-Tinder ingenye yezingosi zokuphola eziningi ezitholakalayo. Kunezinzuzo ezimbalwa ongazithola uma usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Tinder ukuthola uthando. Lapha, sizobheka 6 yezizathu ezingcono kakhulu ukusebenzisa Tinder uma ufuna uthando.
1. Ungayisebenzisa Ukuhlangana Nabantu Abasha
I-Tinder iwuhlelo lokusebenza lwamahhala lokuqomisana ku-inthanethi olukuvumela ukuthi udlulise amehlo kunombolo enkulu yabazoba ozakwethu endaweni yangakini. Uma ubona umuntu omthandayo, ungaswayiphela kwesokudla ngokushesha ukuze “uthande” yena, futhi uma naye swayiphela kwesokudla, ungaxoxa naye.
I-Tinder iwuhlelo lokusebenza lwamahhala lokuphola elenza kube lula ukuxhumana nabantu abasha nabathakazelayo abaseduze nawe. I-Tinder iyindlela ejabulisayo nelula yokuthola abantu abasha ozothandana nabo. Futhi, ungathola abantu abanezintshisekelo ezifanayo. I-Tinder wuhlelo lokusebenza lokuqomisana olusetshenziswa emazweni angaphezu kuka-140. Njengamanje itholakala ngezilimi ezihlukene ezingu-24, ngakho maningi amathuba okuthi uthole umuntu omthandayo.
2. I-Tinder Ikusiza Ukuthola Okufanayo Kobudlelwano.
Abantu abaningi babheka i-Tinder njengohlelo lokusebenza olungasetshenziswa ukuthola ozakwethu ukuze baxhumane, izitendi zobusuku obubodwa, ubudlelwano obuvamile nje, kodwa kukhona amakhulu abasebenzisi ku-Tinder abathole i-soulmate yabo ngale nkundla. Lolu hlelo lokusebenza seluyinkundla ephelele kubo.
Ngakho-ke, noma ngabe ufuna ubudlelwano obuthile noma ubudlelwano obunzima, i-Tynder ingaba uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu lazo zonke izinjongo. Kodwa-ke, udinga ukusho lokhu ku-bio yakho ngaphambili ukuze abanye bazi ukuthi yini oyifunayo.
3. I-Tinder Ingasetshenziselwa Ukuthola Abangane.
Sonke siyalwazi uhlelo lokusebenza lokuthandana lwe-Tinder nendlela olusebenza ngayo: uyaboniswa iphrofayela, futhi uma uthanda, uswayiphela kwesokudla, futhi uma ungakwenzi, uswayiphela kwesokunxele. Uma nobabili niswayiphela kwesokudla, ningaqala ingxoxo. Nokho, kuyamangaza abantu abaningi ukuthi Tinder isetshenziswa futhi ukuthola abangane. I-Tinder wuhlelo lokusebenza lokuqomisana olusekelwe endaweni lapho ungathola khona abantu endaweni yangakini. Iphinde isebenzisa i-Facebook ukuthola abantu abanezintshisekelo ezifanayo nezakho, okwenza kube lula ukwenza abangani abasha.
4. Ukuqomisana ku-Tinder Kugcwele Injabulo
Kuhlale kujabulisa ukuhlangana nabantu abasha uma ubafuna. Futhi, ukuqomisana ku-inthanethi kuyajabulisa kakhulu njengoba ungakwazi ukuxhumana nabanye ngokuqondile ngemva kokufunda ngabo ku-bio yabo nokubheka izithombe zabo.
Uma ubathanda, kufanele uswayiphele kwesokudla, futhi bayakuthanda, kufanele baswayiphele kwesokudla. Lokhu kukuthola ufana kahle kakhulu. Ngakho, ngaphandle kokungabaza, singasho ukuthi ukuthola umlingani ku-Tinder kugcwele injabulo.
5. I-Tinder Iphelele kuma-Introverts
Uma ungumuntu onamahloni noma u-introvert, kungase kube nengcindezi enkulu yokuhlangana nabantu abasha futhi uphume emicimbini yomphakathi. Ngenhlanhla, ngokukhuphuka kwezinhlelo zokusebenza zokuphola ezifana ne-Tinder, abangenisi manje bangahlangana nabantu abasha kusukela ekunethezekeni kwemizi yabo.
Njengoba kufanele uxhumane ngomlayezo lapha, kulula kubantu abanamahloni ukuhlangana nabantu abasha ngaphandle kokuphatheka kabi. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ama-extroverts akakwazi ukuyisebenzisa. Ifanele bonke abantu.
6. Ungaphequlula kalula abantu abaseduze
I-Tinder ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthandana ongazisebenzisa ukuhlangana nabantu abasha. Isebenzisa i-GPS nephrofayela yakho ye-Facebook ukuze uthole abantu abaseduze nawe, futhi ungakwazi ukuxoxa nabo kalula. Uhlelo lokusebenza lukwenza kube lula kuwe ukuthi uhlangane nabantu abasha futhi ubazi kangcono. Ungaxoxa namakhulu abantu nsuku zonke, futhi uhlelo lokusebenza lukwenza kube lula ngawe ukuthi uxoxe nabo futhi uthole ohamba phambili.
7. Kulula Ukuyisebenzisa futhi Isebenza Komakhalekhukhwini abaningi
I-Tinder imahhala ukuyisebenzisa, kulula ukuyimisa, futhi isebenza nama-smartphones amaningi, okuhlanganisa i-Android, i-iPhone, i-Windows Phone, ne-Blackberry. Inhloso ye-Tinder ukwenza kube lula ukuthola usuku endaweni yangakini. Ikubonisa okufanayo okungaba khona endaweni ekuzungezile, futhi ungaswayiphela kwesokudla uma uthanda noma kwesokunxele uma ungakuthandi. Ungakwazi futhi ukusetha okuncamelayo kweminyaka yobudala. Ngakho-ke, kulula ukusebenzisa i-Tinder kuwo wonke ama-smartphones akamuva.
I-Tinder ingelinye lamawebhusayithi omphakathi aziwa kakhulu akusiza ukuthi uthole idethi engaba khona. Noma ngabe ufuna ukuhlangana noma ubudlelwano besikhathi eside, i-Tinder iyisitolo sakho sokuma esisodwa sokuthola abangashadile. I-Tinder yenze lula ukuqomisana ku-inthanethi futhi yakwenza kwaba lula ngempela ukuzama izinsuku ezihlukene.
I-Tinder yenze ukuphola ku-inthanethi kwaba lula ngempela. Ungathola abantu abafuna izinto ezifanayo nezakho, futhi ungabathumela imilayezo ngaphandle kwengcindezi evamile yedethi yokuqala.
umdidiyeli, ештвук, i-tinder, тиндер это, i-tinder
Norstrat Ayini Amaphutha ayo kanye Nezindawo Zokusebenza?